के साझा पार्टीले परिवर्तन ल्याउन सक्ला ! - EAAWAJ (इ-आवाज)
के साझा पार्टीले परिवर्तन ल्याउन सक्ला !
पछिल्लो समय राजनीतिमा उथलपुथल हुँदै आएको छ । युवाहरूलाई मुख्य ढाल बनाएर विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरु खुल्ने क्रममा छन् । चाहे त्यो बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरिएको नयाँ शक्ति होस् चाहे त्यो रवीन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरिरहेको साझा विवेकशील पार्टी । कसैले पनि मन जित्न भने सकेका छैनन् । युवाहरु परिवर्तन चाहन्छ्न् । उनीहरू आफै होमिएर देश बदल्ने सपना देखिरहेका छन् । तथापि पुराना राजनैतिक पार्टीहरुले त्यो सुनौलो अवसर दिन सकेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको साझा विवेकशील पार्टीका उम्मेदवारहरुका बारेमा सामाजिक संजालहरुमा यस्ता कुराहरु लेखिएका छन् ।
लेखक नारायण गाउँले आफ्नो फेसबुकको वालमा लेख्छन् ।
कति हतास, सन्त्रस्त र विक्षिप्त छन् दलहरू भन्ने बुझ्न यो प्रसङ्ग काफी छ ।
यो फोटोमा कुनै स्टन्ट, प्रदर्शनी, महानता, अपमान या उत्तेजना छैन । न यो भड्किलो छ न आपत्तिजनक नै । मेरो फलानो नेताले टेम्पूमा फोटो खिचेको थियो, तैंले किन खिचिस् भन्ने पूर्वाग्रहबाहेक यसमा औँला उठाउनुपर्ने त्यस्तो केही नकारात्मक पक्ष छैन ।
जब विचारमा, तथ्यमा र मुद्दामा लड्ने तागत सकिन्छ, अनि यस्तै एउटा फोटोलाई इश्यु बनाएर व्यक्तिमाथि आक्रमण सुरु हुन्छ । अहिले भएको त्यही हो ।
आफूले चुनाब प्रचारप्रसारका निम्ति प्रयोग गरेको टेम्पूमा उभिएर एउटा फोटो खिच्दैमा विपक्षीको ओठतालु सुक्नु आश्चर्यलाग्दो छ । यसमा झण्डा पनि छैन, ब्यानर पनि छैन, विपक्षीलाई गाली पनि छैन, प्यासेंजरलाई डिस्टर्ब हुने गरी रोकेर खिचेको पनि होइन, अनुमति नै नलिई अन्यको फोटो आउने गरी खिचेको पनि देखिन्न । रोकिएको सफा टेम्पूको पछाडि उभिएर फोटो खिच्नु अपराध पनि होइन । र सबैभन्दा ठूलो कुरो टेम्पूमा खिचेको फोटोले भोट बढ्ने घट्ने पनि होइन । यो नैलो फोटो पनि होइन । हजारौंले यस्तो फोटो खिचेका होलान् । पार्टीको झण्डादेखि नामसम्म विदेशीको अनुकरण गर्नेहरू नै टेम्पू चढेको फोटोलाई नक्कली साबित गर्न लाग्नु लज्जास्पद छ ।
आफ्ना नेताले गुण्डा र अपराधीसँग फोटो खिच्दा त्यो पूज्य हुने, शिक्षकको कंचटमा बन्दूक ताकेर फोटो खिच्दा क्रान्तिकारी हुने, पत्रकारलाई जिउँदै गाडेर फोटो खिच्दा महान् हुने, सूटबूट लगाएर एकमुठी धान काटेर या गाई दुहेर फोटो खिच्न मिल्ने, पुलिसमाथि बलिरहेको मशाल झोसेर फोटो खिच्न हुने अनि विद्यार्थी बोकेको गाड़ीमा आगो लगाएर फोटो खिच्न हुने तर रोकिएको मोटरसाइकल या आफूले भाडामा लिएको सफा टेम्पूमा फोटो खिच्न नहुने भन्ने घटिया तर्क गर्नेहरू कतिसम्म विचलित छन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
उज्ज्वल थापाले नजित्लान्, तिनमा योग्यता होला नहोला, क्षमता होला नहोला, तर तिमीसँग यस्तो फोटो देखाएर गाली गर्नुबाहेक अर्को अस्त्र नभएको देखेपछि मलाई त उनले चुनाब जितिसकेजस्तो लाग्छ । आफूलाई शेर ठान्नेहरुको यो बिरालो रुवाइ साँच्चिकै टीठलाग्दो छ ।
← लेबनानका प्रधानमन्त्री साद अल हरीरीले साउदी अरब छाडे
गजल-भावना पाठक →